प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ १०, २०७६ समय: ११:३९:५४
यौनशिक्षा पढाउँन शिक्षक नै लजाउँछन्, अनि विद्यार्थी लाग्छन् युट्युवतिर
विद्यालयमा पढाइ हुने यौन शिक्षा अपुरो, अपर्याप्त र पाठ्यविधि पनि कमजोर रहेको यस विधामा चासो राख्ने विज्ञहरुले बताएका छन्...
यौन सबैको चासोको विषय हो । त्यसैले यौनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा हाम्रो बढि रुची हुन्छ । तर यति धेरै रुचीको विषय हुँदाहुँदै...
इटहरीमा यसरी हुदैछ यौनधन्दा
इटहरी । इटहरीमा १७ मा रहेको प्रियन्स होटल एण्ड लजले जवरजस्ती यौनधन्दा गराएको पाईएको छ । इलाम घर भएकी २५ बर्षिय किशोरीलाई...
पसिना गन्हायो ? यसरी हट्छ गन्ध!!जान्नको लागि पुरा पढ्नुहोस।।।सक्दो सेयर गर्नुहोला।
गर्मी मौसम चलिरहेको छ। पसिना आउने मौसम। पसिना गन्हाएर चिन्तित हुनुहुन्छ? नियमित नुहाउने गर्नुहुन्छ भने पनि कहिलेकाँही शर...
पछिल्लो समयमा सहबास बजार विश्वमा नै फस्टाउँदै गएको छ । कतिपय देशहरुमा यौन बजार वैध छ भने कतिपय देशहरुमा बर्जित भएपनि गोप...